ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံး ဖွင့်လှ?? - Yangon Media Group
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံး ဖွင့်လှ??
လားရှိုး၊ မတ် ၄
လားရှိုးမြို့တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီဖြစ်သော ရှမ်း ပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကုန်သည် များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (NSSCCI) ရုံး ဖွင့်ပွဲကို မတ် ၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက အဆိုပါ အသင်းရုံးရှေ့၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည် နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်း ထွဋ် တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
ရှေးဦးစွာ အသင်းရုံးကို အ ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဇော်အေး၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း၊ ရှမ်းပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးစိုး စိုးဇော်၊ စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်လွင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း ရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းဘိုဘို တို့က ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး အသင်းဆိုင်းဘုတ်အား ရှမ်းပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက် တာလင်းထွဋ်က စက်ခလုတ်နှိပ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ NSSCCI အသင်းရုံးကြီးကို လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ်အဆင့် ဒေသတွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်များမှ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၏ ညီနောင်အသင်းတစ်ခုအဖြစ် တိုးတက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကာ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် အသင်းချုပ်၏ဦး ဆောင်ကူညီမှုနှင့် အသင်းကြီးအား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင်မြေနေရာနှင့်အတူ ရုံးအ ဆောက်အအုံကို ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
NSSCCI အသင်း ရေရှည် ခိုင်မာတည်တံ့ရန်နှင့် ဒေသတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူများ အားကိုးအားထား ပြုနိုင်ပြီး ပြည်နယ် စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ကာ၊ အနာဂတ်တွင် Business Centre အဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နိုင် ရေးတို့ကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွား မည့် အသင်းဖြစ်ကြောင်း အသင်းရုံးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် အမှာစကား ပြောကြားရာ၌ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းဘိုဘိုက ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့သည်။
Uber ၏ အရှေ့တောင်အာရှ လုပ်ငန်းခွဲများကို Grab ဝယ်ယူရန် နီးစပ်
နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် ရှီးယိုက်မူဆလင်များ ဘာသာရေးပွဲ၌ ရဲများက ပစ်ခတ်လူစုခွဲ၊ သုံးဦးသေဆုံး
တူရကီ သမ္မတနှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းတို့က ဂျေရုဆလင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ထရန့်၏ သဘောထားကို ဆန့်ကျင် ကန?
မူးဝေသည့် ဝေဒနာခံစားခဲ့ရသော အဂူရိုကို မန်စီးတီးထံ အာဂျင်တီးနားပြန်ပို့